Ndeipi nyika yeAfrica iyo Dubai Tourism ichiombera?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » Ndeipi nyika yeAfrica iyo Dubai Tourism ichiombera?
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Nigeria Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Dubai Tourism inotungamirwa na CEO Issam Kazim kuNigeria Travel Event
Nekuyevedza kunowedzera kaviri manhamba, inbound traffic kubva ino nyika yeAfrica kuenda ku Dubai yakakura ne28 muzana gore-ne-gore, ichisimudzira chinzvimbo chayo seyemiririri wechi17th musika wepamhepo sosi.
Dhipatimendi reDhailand reKushanya uye Commerce Kushambadzira (Dubai Tourism) yakazivisa stellar inoteedzera muhuwandu hwekushanya kubva Naijeriya, Musika weAfrica muhombe wemotokari inopinda muDubai, ichitambira 113,000 husiku vashanyi mumwedzi yekutanga 7 ye2019.
Nzvimbo dzakasiyana siyana dzeDhailand dzekukwezva dzakawana kufarira kwakasimba pakati pevafambi veNigerian kuburikidza nehukama hwekudyidzana hwekudyidzana, bespoke mushambadziro wekushambadzira wakasanganiswa, uye inogara iri-pasocial media activations.
Musika uye zviitiko
Kuvaka pakuenderera mberi kwekuedza kupa chikuva chekutepfenyura zvakawandisa zveDhailand zvakazara kune vashanyi vemuAfrica, Dubai Tourism, inotungamirwa na CEO, Issam Kazim, yakaratidza rutsigiro rwayo kuAkwaaba African Travel Market kwegore rechina rakateedzana nenhumwa yakasimba ye21 Dubai. -vakabatana, avo vaisanganisira timu kubva kuExpo 2020 Dubai.
Chiitiko chekuremekedza chekushanya chekuWest Africa chakaunza pamwe vashandi vemaindasitiri kubva kune veruzhinji uye vega zvikamu kuti vape chikuva chekugovana misika mikuru, vachiwedzera kusimbisa hukama hwevamiririri nevashandisi uye nekupa mukana wekusimudzira nzvimbo inogara ichichinja yekuDhailand ichipa kune yakanyanya. vateereri. Kuhwina mubairo we 'Best Stand' wegore rechina rakateedzana, iyo Dubai Tourism stand, iyo yaive hombe pashoo iyi, yakatambira vashanyi ndokumisikidza rekodhi yeAkwaaba nenhume dzinopfuura mazana manomwe dzaipinda musangano wayo wepanhau.
Kufara kwevanhu, vatanhatu vevapfumbamwe veNollywood vanozivikanwa kubva kumushandirapamwe we "Dubai Faceoff" vakaita kushamisika kuoneka pachikuva kuti vataure ruzivo rwavo uye kuyemura kweguta. Pakati pechirongwa, Issam Kazim, CEO, Dubai Corporation yeKushanya neKushambadzira (DCTCM) yakabatana naYake Akanaka Fahad Obaid Mohamed Al Taffag, Mumiriri weUnited Arab Emirates kuFederal Republic yeNigeria kuti vape misika mishumo uye kugadzirisa nhamba dzevashanyi. Zvimwe zvakatanhamara zvaisanganisira zvakasiyana siyana zvekuenda kuDubai uye muongororwo wemakampeni emusika.
Chiitiko ichi chaisanganisirawo akati wandei misangano yevatengesi nevatapi venhau, kusanganisira TBI, mushambadzi wekutengeserana uye mumwe weakakura muNigeria; Megaletrics, mumwe weavo varidzi venhepfenyuro muNigeria, pamwe nevamwe veDubai vamwe vanokosha vevatengesi GHI Assets, NANTA, Seki, uye Wakanow.com.
Sezvo Dubai Tourism ichiramba ichizvimiririra semuenzaniso wenyaya yekushanya kumusika wemuAfrica wekufamba, inoramba ichitarisa kuwedzera zviitiko zvekushambadzira zvinosanganisira kudzidzisa mashopu, mabasa ekutengeserana (kutengesa mashandiro, nzendo dzefamisheni) nemishandirapamwe pamwe nekuwedzera pamusoro pe nhamba yevaDubai-based Partners iyo inotora chikamu mumigwagwa uye zviitiko mumusika weNigerian.
Dubai-based Partners aripo ku Dubai Tourism's stand yaisanganisira American Hospital, Avani Deira Dubai Hotel, Copthorne Hotel, Dubai Health Authority, Emaar Hospitality Group LLC, Expo 2020, Golden Sands Hotel Apartments, Golden Treasure Tourism LLC, JA Resorts & Hotels LLC, Jumeirah Boka, Mida Kufamba, Pacific Destination Tourism LLC, Rayna Tourism LLC, Red Apple Middle East Tourism LLC, Royal Arabian Destination Management DMCC, Tabeer Tourism, The Ritz Carlton Dubai, JBR, Travel Destination Online DMCC, W Hotel Palm Jumeirah, Wings Tours Gulf (LLC).
Issam Kazim, CEO, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM), vakati: “Kugamuchira vaeni kukuru uye kugamuchirwa kwechokwadi kwatakatambira panguva yedu muNigeria kwakagadzirira nzira Akwaaba Travel Market 2019 yakabudirira. "izvi zvakaita sesangano redu repasi rose rekushambadzira kuti tibatsirane nevakabatana, tichisimbisa hukama hwedu nenyika yeAfrica yekutengeserana."
Zvichiwedzera kukurudzira kukura mudunhu rose reAfrica, Dubai Tourism iri kuenderera mberi nekushambadzira nzira yayo yekushambadzira yakawanda, ichiendesa chirongwa chakasarudzika chekutaurirana icho chinoona simba renhau rezvematongerwo enyika mukukanganisa mafambiro ekutora vafambi. Maitiro aya akaona kuvhurwa kwemushandirapamwe we'Dubai Face Off ', uko Dubai Tourism yakabudirira kushanda pamwe nevekutengeserana navo WONTRA uye Tour Brokers International kupa yakasarudzika yekufambisa nzira iyo inoita kuti vateveri vafambe nevakakurumbira ve'Nollywood'.
Sechikamu chemushandirapamwe, vapfumbamwe vanozivikanwa vekuNigerian vakapa vateveri mukana usingawanzo vaperekedzwa kuenda kuDubai, nepakeji iri kupa matikiti ekubhururuka, vhiza yekupinda, kufambiswa kwenhandare, husiku huna kugara pa4 kana 5 yekugara nyeredzi, safari renje ruzivo, kushanya kweguta, matikiti kuIMG World's of Adventure, zviitiko zvepasi rose zvekudyira, pamwe nenguva yakatarwa nevanozivikanwa.
Nerutsigiro rwehunyanzvi kubva kune vane chekuita mukati meguta, vanhu vane mukurumbira uye vateveri vavo vakapinda mumatanho akateedzera kusangana kwenhau, vachikumbira vateveri kuti vavhotere vavanoda kukunda panguva yese yekugara kwavo. Mushandirapamwe uyu wakadarika mhedzisiro inofungidzirwa nevateveri vanopfuura mazana maviri vaienda kuDubai kumushandirapamwe chete, nepo vanhu vakakurumbira vakagamuchira zvisungo zvemamiriyoni makumi matatu nemasere pasocial media kusimudzira dhipatimendi 'rinogara riri' pasocial media zano - iro, kusvika parizvino, rakapfuura yegore rese rakafungidzirwa kubatanidzwa zvinangwa neinenge mazana matatu muzana.
VaIssam Kazim, CEO, DCTCM, vakataura nezve mushandirapamwe uyu: "Sezvo Dubai iri kuramba ichienda kunzvimbo yakasarudzika kune vafambi veNigeriya, takazvipira kuwedzera mikana yeimwe yemisika yedu inokurumidza kukura nekupa mishandirapamwe yakashambadzirwa uye kushambadzira mashandiro ayo anoratidzira iro guta-repasirose zvirevo zvirevo uye zvakasarudzika zviitiko pane zvinopihwa. Mushandirapamwe we'Daily Face Off 'muenzaniso wakanaka wekuedza kwedu kushandisa simba revashandisi vanogadzira uye kutenderera kwehupenyu muzvikamu zvekutarisa zvinoshuvira zviitiko zvakasarudzika uye zvakasiyana. "
Sezvo dhipatimendi richienderera mberi nekuvaka uye kusimbisa hukama hwayo hwakasimba nemusika weNigerian, Dubai kushanya kune hurongwa hwekuparura yechipiri yakanangwa yechando kushambadzira mukurumbira nemushandirapamwe wekunze, redhiyo, uye zvemagariro enhau mashandiro ekuenderera mberi nekuita vashanyi veNigerian uye chinzvimbo Dubai senzvimbo yekuenda yesarudzo gore rese.
Mu2012 kabhineti yakadzokororazve, St Ange akagadzwa segurukota rezveKushanya neTsika izvo zvaakasiya chigaro musi wa28 Zvita 2016 kuti aite chinzvimbo chekuva munyori weSecretary General weWorld Tourism Organisation.
Seychelles muenzaniso wakanaka wekushanya kwakasimba. Izvi hazvishamise kuona Alain St. Ange achitsvakwa semutauri padunhu repasi rese.